Red Automobile Exhibition Hall Modifie Container Short Description No need to install. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589m 40HQ- 12.192*2.438*2.896m Quick Detail Item name Red automobile exhibition hall modified secondhand shipping container Brand Name…
Modified 20ft Shipping Container Warehouse No Need To Install Short Description No need to install. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589m 40HQ- 12.192*2.438*2.896m Quick Detail Item name Modified 20ft shipping container warehouse no need…
Fashion Green Shipping Container Office With Platform Short Description No need to install. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589m 40HQ- 12.192*2.438*2.896m Quick Detail Item name Fashion green shipping container office with platform Brand Name…
20ft And 40ft Brand New Shipping Container Basketball Court Office Short Description No need to install. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589m 40HQ- 12.192*2.438*2.896m Quick Detail Item name 20ft and 40ft brand new shipping…
40ft Modified secondhand shipping container scenic area lounge Short Description No need to install. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589m 40HQ- 12.192*2.438*2.896m Quick Detail Item name 40ft Modified secondhand shipping container scenic area lounge…
အစာရှောင်ခြင်းညီလာခံ Flat ထုပ်ပိုးကွန်တိန်နာဒီဇိုင်း 1